FAQ - Jinan JCUT CNC Equipment Co., Ltd.
Masinina cnc hazo mpanafika ATC
Masinina cnc milina lalana
Ity no voalohany nividianako ny milina, mora fampiasa ve?
Azontsika atao ny manome ny boky fampianarana na video ho an'ny fitarihana. Raha sarotra ho anao hianaranao dia afaka manampy anao amin'ny "ekipa mpijery" amin'ny Internet izahay, amin'ny telefaona na Skype manazava.
Ahoana no hisafidianana milina mety?
Azonao atao aminay ny milaza anay ny fitaovana sy ny habeny ary ny fangatahan'ny milina miasa. Azontsika atao ny manome soso-kevitra ny milina mety indrindra arakaraka ny zavatra iainanay.
Ahoana no fomba itokisako ny orinasanao sy ny vokatrao?
Ny fizotran'ny famokarana manontolo dia ho eo ambany fanaraha-maso tsy tapaka sy fanaraha-maso ny kalitao. Ny masinina feno dia ho sedraina mba hahazoana antoka fa afaka miasa tsara izy ireo alohan'ny tsy maha-orinasa azy. Ny horonantsary fitsapana sy sary fitiliana dia ho hita alohan'ny fandefasana.
Raha manana olana ny milina taorian'ny baiko azy dia inona no azoko atao?
Fandefasana maimaim-poana dia alefa aminao ao anaty vanim-potoanan'ny masinina raha misy olana ny milina. Ny serivisy ho an'ny serivisy maimaimpoana maimaim-poana ho an'ny milina, azafady azonao atao ny mifandray aminay raha misy olana ny milina anao. Homenay anao ny serivisy 24hours amin'ny telefaona sy skype.
Azoko atao ve ny mitsidika ny orinasao?
Eny! Tena tianay ny mpitsidika hitsidika ny orinasa kami!
Ahoana ny daty fandefasana anao?
Ho an'ny milina mahazatra, 15 andro miasa; Ho an'ny milina namboarina manokana dia manodidina ny 20 andro fiasana.
Ny milina MOQ dia milina napetraka 1. Azontsika atao ny mandefa milina mivantana amin'ny seranan-tsambo, azafady mba lazao aminay ny anaran'ny seranan-tsambo. Hisy ny fanaterana entana tsara kokoa sy ny vidin'ny milina ho anao.
FIVORIANA FARANY +8618006360664
FIVORIANA FARANY +8615863173380